Estradiol Benzoate Ọgwụ (Estrogen) - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
Estradiol Benzoate Ọgwụ (Estrogen) [Description] Ngwaahịa a bụ a acha odo uzo mmanu mmanu mmiri mmiri. [Function na ojiji] O nwere ike na-akwalite mmepe nke abụọ mmekọahụ ịrịba ama na e guzobere mmekọahụ akụkụ maka nwanyi anụmanụ, welie ndị ọrụ nke mkpi maka uteruses na oviducts, dịkwuo uche nke uteruses ka oxytocin, na-akwalite ntụrụndụ nke cervical orifices. Ọ bụ ike na-akwalite mmepe nke mammary duct usoro. Na a obere ego nke progesterone ...
Estradiol Benzoate Ọgwụ (E strogen )
Ngwaahịa a bụ a acha odo uzo mmanu mmanu mmiri mmiri.
Ọ nwere ike na-akwalite mmepe nke abụọ mmekọahụ ịrịba ama na e guzobere mmekọahụ akụkụ maka nwanyi anụmanụ, welie ndị ọrụ nke mkpi maka uteruses na oviducts, dịkwuo uche nke uteruses ka oxytocin, na-akwalite ntụrụndụ nke cervical orifices. Ọ bụ ike na-akwalite mmepe nke mammary duct usoro. Na a obere ego nke progesterone, o nwere ike ime ka nwaanyị ụmụ anụmanụ nwere agụụ mmekọahụ na mmekọahụ. Ngwaahịa a na-ebe-etinyere na-edebe nwa ebu n'afọ na membranes, endometritis, na eriri akpa nwa pyometra mgbe nnyefe n'ihi nwaanyị anụmanụ. Ọ na-ike-eji maka na-adịghị ike eriri akpa nwa uru mgbe cooperatively eji na oxytocin. Ke adianade do, ọ na-etinyere na mmepe usoro nke mammary glands na itinye n'ọkwa nke lactation maka ehi.
1. arụkọ eji na Ime Mare ọbara Gonadotropin mee estrous ịrịba ama doro anya n'oge na-akwalite estrus: iji ikwado nchọpụta nke estrus na-eme ka estrous ịrịba ama doro anya mgbe Ime Mare ọbara Gonadotropin na-etinyere na-akwalite estrus, intramuscular ntụtụ 6-8mg nke estradiol benzoate nwere ike na-emejuputa atumatu n'ụbọchị nke abụọ mgbe iji Ime Mare ọbara Gonadotropin.
2. Ime ka uche nke eriri akpa nwa uru ka oxytocin: Ngwa nke estrogen na usoro nke na-amụ nwa nwere ike ọ bụghị nanị na-akwalite oghere nke cervical orifices, ma dịkwuo uche nke eriri akpa nwa uru ka oxytocin. Tupu ntụtụ oxytocin, estradiol benzoate ga-agbara, na dosing bụ dị ka ndị: 3-10 mg maka ezì, 5-20mg ehi, 10-20mg nke inyinya, 1-3 mg atụrụ, 0.5-2.0mg maka nkịta, na 0.2-0.5mg maka nwamba.
3. Ọgwụgwọ nke eriri akpa nwa ọrịa: ọ ike na-emeso endometritis, eriri akpa nwa inertia (subinvolution nke akpanwa), ma na-ejigide nwa ebu n'afọ na membranes mgbe nnyefe mgbe cooperatively eji na oxytocin. Estradiol ga-agbara mbu (20-30mg n'ihi na nnukwu anụ ụlọ, 10-20mg maka n'etiti-sized anụ ụlọ, na 5-10mg maka ụmụ obere anụmanụ), na mgbe ahụ na oxytocin ga-eji maka ọgwụgwọ (75-100IU maka ehi na inyinya, 30- 50IU maka ezì na atụrụ, 10-25IU maka nkịta, na 5-10IU maka nwamba); intramuscular injection ma ọ bụ intrauterine injection ga-etinyere, ozugbo ọ bụla 7 ụbọchị.
4. E estrus: elu doses nke estradiol benzoate ike ga-eji na-akwalite estrus maka adakarị anoestrus ụmụ anụmanụ; Otú ọ dị, estrus nke a na-emekarị na-apụghị inye ebili nkịtị mmepe nke follicle na ovulate, ma normalize ndị estrus okirikiri. The dosing bụ dị ka ndị: 10-20mg maka ehi na ịnyịnya; 5-10mg maka ezì; 3-5mg maka atụrụ.
1. High doses, ogologo oge ma ọ bụ ekwesịghị ekwesị ojiji nke ngwaahịa a nwere ike ime ka ovarian cysts, ite ime, ovarian atrophy na-enwe mmekọahụ okirikiri njide maka nwanyi ụmụ anụmanụ.
2. Contraindicated nri anụmanụ.
3. Naanị eji maka anụmanụ amụba.
4. Kwesịrị ghara metụrụ ụmụ.
28 ụbọchị n'ihi na anu-ulo, na aturu na ìgwè ezì (tentetivu); 7 ụbọchị maka mmiri ara ehi (tentetivu)
Shaded na airtight; echekwara n'okpuru okpomọkụ nke 30 ℃.
Previous: Dexamethasone sodium phosphate Ọgwụ
Osote: Gonadotropin maka Ọgwụ (GnRH)
Estradiol Benzoate 0,2% Ọgwụ
Estradiol Benzoate Ọgwụ Animal
Oestradiol Benzoate Ọgwụ